टिटबिट - नारी
मलाई कमेडी मन पर्छ : आँचल शर्मा
अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?म्युजिक भिडियोहरू त थुप्रै छन् । नयाँ कमेडी फिल्म दाल, भात–तरकारीमा समेत व्यस्त छु ।शत्रु गतेपछि फेरि कमेडी चलचित्रमा देखिनुको कारण ?मलाई कमेडी एकदम मन पर्छ । कतिले त मलाई कमेडियन नै भन्छन् । सबैको कुरा सुन्दा म पनि राम्रो कमेडी गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ । कहिलेकाहीँ क्यारिकेचर गर्न खोज्छु । धेरैले ऋषि धमलाको जनता जान्न चाहन्छन् को क्यारिकेचर रुचाउनुभयो । म रुवाउने, हँसाउने जस्तो पनि अभिनय गर्न सक्छु । जसको कथाले मलाई तान्छ । म त्यसमा अभिनय गरिहाल्छु । कस्तो चलचित्रमा अभिनय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?महिलाप्रधान चलचित्रमा काम गर्न मन छ । नेपालमा महिलासम्बन्धी थुप्रै कथा छन् । तिनलाई दर्शकमाझ सन्देशपूर्ण हिसाबले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । मलाई त्यस्ता वास्तविक कथामा आधारित चलचित्रमा अभिनय गर्न मन छ ।सानोमा के बन्छु भन्ने थियो ?नायिका त अडिसन दिनेबित्तिकै अचानक भएँ । वास्तवमा म वकिल बन्न चाहन्थेँ । अझै पनि त्यो सपना कायमै छ । मास्टर भर्खरै सकियो, हेरौं ? चलचित्रमा त मलाई भन्दा बहिनीलाई रुचि थियो । त्यसो भए एकपछि अर्को चलचित्र किन त ?मैले कहिल्यै नायिका हुन्छु भन्ने सोचेकी थिइन । यद्यपि चलचित्रमा अभिनय गरेपछि अभिनयको लत लाग्दो रहेछ । राम्रो कथा र टिम आयो कि नाइँ भन्नै नसकिने ।तपाईंका सबैभन्दा प्यारा व्यक्ति को हुन् ?मेरो बुवा, बुवा नै मेरो वेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ । म हरेक निर्णय बुवाकै सल्लाहमा लिन्छु । कुनै चलचित्रको अफर आएको छ भने पनि साइन गर्नुअघि बुवालाई स्क्रिप्ट सुनाउँछु । म कुनै पनि काम बुवाको चित्त दुखाएर गर्दिन ।
नारी संवाददाता , वैशाख ४, २०७६
केहि हप्ताअघि एक अनलाइनमा अन्तरवार्ताका लागी प्रस्ताव आयो । उनि चलचित्र निर्माण टिमको सल्लाह अनुसार अन्तरवार्ताका लागी गइन् । त्यहाँ लामै कुराकानी भयो । घर आउन नपाउँदै युट्युवमा भिडियो कुराकानी र अनलाइनमा समाचार समेत आयो । अन्तरवार्तामा हेडिङ थियो, ‘आयुषमानकी पुर्व प्रेमी !’
नारी संवाददाता , चैत्र ८, २०७५
डन्ट वरी, बिहे पक्का हुन्छ : रेखा थापा
२० बर्षदेखी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय अभिनेत्री रेखा थापाले आफ्नो बिहे चाँडै हुने संकेत गरेकी छिन् । कान्तिपुरका रामजी ज्ञवालीसँगको छोटो गफमा थापाले भनिन्, ‘बिहे नहुने भनेर कसले भन्यो ? बिहे पक्का हुन्छ, तर ४० बर्ष पुगेपछि मात्रै ।’
नारी संवाददाता , चैत्र ४, २०७५
अब त स्वेता नरोइदिए हुन्थ्यो नि !
अभिनेत्री स्वेता खड्काका श्रीमान श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएको ४ बर्ष भैसकेको छ । २०७१ साउन २५ मा त्यतिबेलाका चर्चित अभिनेता श्रेष्ठको निधन भएपछि समग्र चलचित्र क्षेत्र शोकमा डुब्यो, स्वभाविकै उनकी श्रीमती स्वेता र परिवारलाई निकै ठुलो पिडा भयो ।
नारी संवाददाता , फाल्गुन २२, २०७५
सेनाको अवकाशपछि प्याजेन्ट सुन्दरी
अवकाश प्राप्त हुँदा उनी दंग थिइन् र भाग लिन पुगिहालिन्, मिसेज हिमालयन नेपाल २०१८ मा र उनी विजयी पनि भइन् । त्यसपछि गोमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै मिसेज एसिया प्यासिफिक–२०१८ मा पुगिन् जहाँ उनले सोसल मिडिया क्विनको अवार्ड हात पारिन् ।
नारी संवाददाता , पुस १६, २०७५
भर्सटायल सोना अमात्यको उक्त म्युजिक भिडियोले मूलत: नेपालका समग्र जाति, उमेर, समूह तथा तहका नारीलाई आफ्नो लक्ष्यमा दृढ भएर अघि बढ्न उत्प्रेरित गरेको छ । लामो समयदेखि शास्त्रीय संगीतमा साधनारत अमात्यको ‘म त खुल्ला छु’ गीतले आफ्नो करियर तथा लक्ष्यमा आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न, आत्मनिर्भर हुन तथा स्वतन्त्रता उपभोग गर्न हौस्याउँछ ।
नारी संवाददाता , पुस ९, २०७५
सुरुमा केही समय भेटनरीमा काम गरे पनि मोडलिङको मोहले गर्दा नामको अगाडिको डाक्टरलाई थाती राखी उनी यसमै रमाइरहेका छन् । कार्कीले मिस्टर नेपालमा कोरियोग्राफर तथा प्याजेन्ट डाइरेक्टरका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।
नारी संवाददाता , पुस ४, २०७५
नाटक योनीका कथाहरूमा महिलाको यौन अधिकार, स्वतन्त्रताको समस्या, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य एवं यौन हिंसाविरुद्धको आवाज समेटिएको छ । विश्वभरका १ सय ४० देशका अनेकौं सहरमा मञ्चन हुने यो नाटक ४९ भाषामा अनुवाद भएको छ । नेपालमा भने यसको निर्देशन आकांक्षा तथा उनकी साथी गुञ्जनले संयुक्त रूपमा गरेका हुन् ।
नारी संवाददाता , चैत्र १२, २०७४
रोजाइ एलिशा राईको
ठाउँ : नेपालमा दोलखा तथा विदेशमा सिंगापुर ।परिकार : म:म र पिज्जा ।
नारी संवाददाता , फाल्गुन ८, २०७४
थिएटरबाट आएकी पूजन
५–६ कक्षा पढ्दा इटहरीमा थिएटर ग्रुपमा संलग्न भएर नाटकहरूमा अभिनय गर्दै आएकी पूजन थापा अहिले काठमाडौंका थिएटरमा रमाइरहेकी छिन् । पूजनले एसएलसीपछि मकालु टेलिभिजनमा भिजेका रूपमा कार्यक्रम चलाइन् ।
नारी संवाददाता , फाल्गुन ४, २०७४
बायोपिक चलचित्रमा वेनीशा
स्वरबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी नायिका वेनीशा हमालको करिअरलाई लामो समयपछि चलचित्र झ्यानाकुटीले उचाइमा पुर्‍यायो । धेरैले उक्त चलचित्रमा मालतीका रूपमा वेनीशालाई मन पराए । चलचित्रमा उनको संवाद शैली एवं गेटअपले दर्शकको मन मात्र पगालेन, उक्त कुरा उनको करिअरकै टर्निङ प्वाइन्ट साबित भयो ।
नारी संवाददाता , फाल्गुन ३, २०७४